Indawo eKhethekileyo yaseLanna eNtofontofo, iChapel kunye neGadi - I-Airbnb
Indawo eKhethekileyo yaseLanna eNtofontofo, iChapel kunye neGadi
UDennis unezimvo eziyi-48 zezinye iindawo.
I-Exclusive Private Estate yethu ikwimizuzu nje embalwa ukusuka e-Mae Sai emazantsi entaba inombono omkhulu osingise eMyanmar naseDoi Tung.
Ukuba ukhangela indawo yasemaphandleni kunye namava ayinyani kwi-Lanna Style Villa ekhethekileyo, uya kuyithanda. I-ambience, indalo kunye ne-chapel encinci kwi-Estate yodwa. Ilungele izibini, iintsapho kunye nezilwanyana zasekhaya. Ngokwesiqhelo indawo yeHoliday Estate yethu yabucala kwaye ibingayi kuvulelwa uluntu, kodwa intle nje ukuyigcina kuwe.
Ikhethekileyo kwaye ibanzi iLanna Style Villa eneMigangatho yasentshona kunye nezinto eziluncedo zasentshona. Kukho izakhiwo ezi-5 eziphambili kwi-Estate. Indawo ebanzi kakhulu ye-40sqm ye-Lanna style Villa, i-30 sqmVilla yakho, iNdawo yokuHlala ePhambili, iNdlu yeMaid eneGumbi loMqhubi kunye neChapel. I-Estate yethu ineGadi enkulu egcinwe kakuhle, enezityalo ezininzi zeOrchids, iPalm kunye neBamboo imithi kunye nezinye iiFlora kunye neFauna. Zonke iibhedi kunye nefanitshala zenziwe ngeTeak Wood kwisitayile saseThai Lanna. Onke amagumbi ane-LG Artcool Airconditioning, iiTV ze-LG, iiMattresses ze-Slumberland kunye nezibane ze-LED kumgangatho okhethekileyo wokuphila waseYurophu. Singabonelela ngeBhedi yoNtwana ukwenzela umntwana wakho omncinci, ngokuqinisekileyo simahla. Ibekwe emazantsi eNtaba kunye nembono entle ukuya ezintabeni kunye neMyanmar. Indawo enkulu yohambo oluya eDoi Tung, iGolden Triangle, eMyanmar naseChiang Rai.
Ifumaneka kwindawo yasemaphandleni kodwa kufutshane nohola wendlela yindawo entle yoHambo kwiphondo laseChiang Rai naseMyanmar. Uya kuba namava endalo kunye nenkcubeko yasemaphandleni yaseThai, kunye nemigangatho yaseYurophu yokuphila ubomi obutofotofo.
Le yindlu yeholide. Ngokwesiqhelo asibikho kodwa uMncedi wethu waseKhaya angakunceda ngolonwabo kwaye unokuhlala ukhululekile ukusinika umsesane.